Zaridaina Jean Ralaimongo Mahajanga be: ho lasa toerana fakana lamin-tsaina | Région Boeny
Notanterahina ny Alarobia 28 jiona 2017 teny amin’ny zaridaina Jean Ralaimongo Mahajanga Be ny fametrahana ny vato fehizoro amin’ny hanatsarana ity zaridaina ity.
Monumemt Mauriès no anaran’ny toerana talohan’ny taona 1902. Nanomboka tamin’io taona io kosa dia nampitondraina ny anarana zaridaina Jean Ralaimongo izy, izay manana velarana 1564m2.
Hanomboka ny 02 jolay 2017 ny asam-panavaozana ity kianja fialan-tsasatra manan-tantara eto Mahajanga ity. Mitentina eo amin’ny 78 000 000Ar ny vola ho laniana amin’izany ary ny orinasa EMCG (Entreprise Malagasy de Construction Générale) no nahazo ny asam-panavaozana.
Fiaraha-miasa teo amin’ny kaominina ambonivohitr’i Mahajanga sy ny orinasa Azam Bakhresa avy atsy Afrika Atsimo, izay mpamatsy ny vola no hanatontosana ny asa.
Nosafidian’ny roa tonta manokana ny fanavaozana ny zaridaina Jean Ralaimongo noho izy toera- manatantara eto Mahajanga ka tafiditra anatin’ny fanatsarana ny tanàna, ankilany. Fa andaniny dia fanehoana ihany koa hoan’ny mpamatsy vola fa vonona ny hananganana ny orinasa lehibe hanodina ny varim-bazaha ho lasa lafarina eto Mahajanga izy ireo amin’ity taona ity ihany, hoy ny solotenan’ny Azam Bakhresa.
Anisany nampiavaka an’ity tanànan’i Mahajanga ity dia ny fananany an’ireo zaridaina manana toetra vakoka hoy kosa ny lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, izay nirary ny mba ahitan’ity tanànan’i Mahajanga ity indray ny akantony fahizay.
Hentitra kosa ny Ben’ny tanànan’i Mahajanga dieny izao fa tsy ho azo atao ny mivarotra manodidina ny zaridaina sy ny mandefa mozika mitabataba eo satria efa natao ho tena toerana fakana aina sy lamin-tsaina ho an’ny vahoaka no tanjona amin’ity zaridaina ity rehefa vita soa aman-tsara ny fanavaozana azy.